By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoJulayi 17, 2020.
Isitulo esiluhlaza- xa ilindle lakho libonakala liluhlaza- ngesiqhelo sisiphumo sento oyityileyo, enje ngesipinatshi. Amayeza athile okanye izongezo zentsimbi nazo zinokubangela isitulo esiluhlaza.
Iintsana zidlula isitulo esimnyama esimnyama esibizwa ngokuba yi-meconium, kwaye iintsana ezincancisayo zincancisa ukuvelisa izitulo eziluhlaza-tyheli. Kubantwana abadala nakubantu abadala, isitulo esiluhlaza asiqhelekanga. Akunqabile ukuba kubangele inkxalabo.
Iintsana zinokuba nesitulo esiluhlaza ngenxa:
Ukungalugqibi ukuncancisa ngokupheleleyo kwelinye icala, ngaloo ndlela ulahle ubisi lwebele olunamafutha aphezulu, oluchaphazela ukwetyiswa kobisi
Iprotein hydrolyzate formula, esetyenziselwa abantwana abanobisi okanye i-soy allergies
Ukungabikho kweebhaktheriya eziqhelekileyo zamathumbu emathunjini kwiintsana ezincelisayo
Abantwana kunye nabantu abadala
Izizathu zesitulo esiluhlaza zibandakanya:
Ukutya okuphezulu kwimifuno eluhlaza, njengespinatshi
Shayela ugqirha wakho ukuba wena okanye umntwana wakho unesihlalo esiluhlaza ngaphezu kweentsuku ezimbalwa. Isitulo esiluhlaza sihlala sivela kurhudo, ke sela amanzi amaninzi kwaye ufune unyango kwangoko ukuba wena okanye umntwana wakho uphelelwe ngamanzi emzimbeni.
Umjikelo oluhlaza okwesibhakabhaka e 64
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga ze-diclofenac
indlela yokufumana umda wegalelo
elona chiza lilungileyo leti